Vary - Wikipedia
Ny vary (Oryza amin' ny teny latinina) dia zava-maniry ambolena na eny an-tanimbary mando mandavan-taona, na volena maina an-tanety. Ny vary no zavamaniry manana voamadinika mitana ny laharana faharoa eto an-tany amin' ny voly ho sakafon' olombelona, aorian' ny katsaka, raha ny lanja vokarina no resahina. Fototra amin' ny nahandro malagasy, aziatika sy indianina izy. Mamboly vary ihany koa ny firenena sasantsasany ao Eorôpa toa an' i Italia, Espaina, Rosia, Gresy, Portiogaly, Frantsa, Okrainina ary Biolgaria.
Ahitana karazany maro arakaraka ny habeny, lokony, tsirony ny vary. Maro koa ny fomba afaka ahandroana azy. Ho an' ny Malagasy dia ny vary maina sy ny vary sosoa no ampifandimbiasina, fa ny firenena hafa dia manao azy ho paty na lasopy na atao tsindrin-tsakafo koa aza (vary amin-dronono)...
3 Voly vary
4 Fomba sy voambolana malagasy momba ny vary
4.2 Fomba fiteny
5 Famokaram-bary sy tsena iraisam-pirenena
6 Fampiasana ny vary
6.1 Sakafo sy nahandro
6.2 Ho an'ny fahasalamana
7 Endrika:Tb OGM : Organismes génétiquement modifiés
8 Voka-dratsin'ny fambolem-bary amin'ny tontolo iainana
9 Jereo ko
9.1 Loharano sy tonon-tsiahy
9.2 Lahatsoratra mifandray
9.3 Rohy ivelany
Illustration d'un ouvrage botanique
Oryza alta Swnllen
Oryza brachyantha Chev.
Oryza glaberrima Stend.
Oryza schlechteri Pilqer
Tombanana ho eo amin' ny 6 500 hatramin' ny 8 500 taona eo ho eo izay no efa nanaovan' ny zanak' olombelona ny fambolem-bary. Ny tany Azia no efa namboly vary hatramin' ny 8 500 taona, raha hatramin' ny 3 500 taona kosa no namboly vary ny teto Afrika. Tamin' ny taona 800 tal JK no nahatongavany tao Eorôpa. Ny tapaky ny taonjato faha-15 no nihanaka tao Italia sy Frantsa ny fambolem-bary ary niitatra tamin' ny kaontinanta iray manontolo. Tany Etazonia indray dia tamin' ny taona 1694 no tonga tao Carolina Atsimo izy, ary inoana fa avy taty Madagasikara no niaviany tamin' izany. Ary tamin' ny taonjato faha-18 no nentin' ny Espaniôla tany Amerika Atsimo ny fambolem-bary.
Ny 16 desambra 2002, dia nofidian' ny fivoriambe ara-potoanan' ny Firenena Mikambana ho Taona Iraisam-pirenena ho an' ny Vary ny taona 2004. Ireto avy ireo firenena nanohana izany: Bangladesy, Brunei Darussalam, Borkina Fasô, Kambôdia, Cuba, Cyprus, Korea Avaratra, Ecuador, Fiji, Gabon, Grenada, Guyana, India, Indonezia, Japana, Kazakstana, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Madagasikara, Mali, Malayzia, ny Nosy Marshall, Mauritania, Myanmar, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Pakistan, Peru, ny Filipinina, Saint Vincent & Grenadines, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Thailand, Togo, Vietnam, ary Zambia.
Asa amin'ny fambolem-bary ao Bangladesh
Miisa 2 000 eo ho eo ny karazam-bary volena eran-tany. Amin' ny ankapobeny dia isan-taona no miakatra ny voka-bary, amin' ny vanim-potoanan' ny fararano. Any amin' ny firenena vitsy (faritr'i Mékong ohatra) anefa dia mety miakatra hatramin' ny in-3 ny vary ao anatin' ny taona iray.
Eto Madagasikara dia mety ho in-2 izany ho an' ny tantsaha izay mamboly vary an-tanety. Vao miresaka fambolena vary eto Madagasikara dia ny faritra Alaotra izay misy ny Sihanaka no mitazona ny laharana voalohany. Sompitra faharoa manaraka azy i Marovoay. Mifamatotra amin' ny kolontsaina sy ny fiainana andavan'andron' ny Sihanaka ny fambolena vary. Araka ny lovantsofina dia nolovaina tamin' ireo Razambe fahiny ny fambolena vary ao Alaotra. Ny Sihanaka araka ny fantatra dia taranaky ny Indianina (India) sy ny Vazimba. Noho izany dia tompony amin' ny fambolena vary ny Malagasy fa tsy mpindrana. Ireo faritra ireo dia miavaka amin' ny fambolem-bary amin' ny velarana midadasika tokoa. Ho an' ny faritra Alaotra manokana dia manana an' ilay antsoina hoe: Valabe tsy taka-basy izy. Izany hoe tany lemaka izay midadasika tokoa ka ny fara-vodilanitra no fetrany. Tsy mora araka izany ny fambolena vary fa misy fepetra sy dingana tsy maintsy arahina.
Mandalo dingana maro ny vary ao anatin' ny fambolena azy :
Ny voany, izay antsoina hoe akotry na paddy, no sady iaingan 'ny fambolem-bary no iantefany ihany koa. Ny akotry tokoa mantsy no volena indray hitombo isa, ary ny ampahany dia hamainina sy totoina hohanina.
Rehefa avy totoina ny akotry avy nahahy, dia azo ny atao hoe vary fotsy, izay efa vonona handrahoina sy hohanina. Amin' ny ankapobeny dia manome vary fotsy 600 g eo ho eo ny akotry 1 kg rehefa totoina. Marihina fa ny hoditry ny akotry izay avy nototoina, izay antsoina hoe ampombo dia mbola azo ampiasaina ho sakafom-biby ihany koa.
Ahazoana kobam-bary ihany koa ny vary fotsy raha mbola totoina ho lasa vovoka, ny kobam-bary dia ahafahana manao mofo toy ny mofogasy na ramanonaka.
Ketsa : Apetraka ao amin' ny toerana somary mandomando ny akotry ka mitsiry. Alentika anaty tanin-ketsa izay efa mando tsara ireo vary akotry mitsiry ireo ka rehefa maniry eo amin'ny 10 hatramin' ny 50 sm eo ho eo no atao hoe ketsa.
Afindra mankany amin'ny tanim-bary indray ireo ketsa ireo, io no atao hoe manetsa.
Maro samihafa ny teknika fambolem-bary, arakaraky ny toerana sy ny karazam-bary volena, eto Madagasikara dia ezahin' ny ministera apariahina izao ny voly vary maro anaka sy ny ketsa valo andro.
Sarotra sady mavesatra ny fambolem-bary. Araka izany dia vitsy ihany ireo firenena mamboly vary, ary ny voka-barin' i Sina sy India dia efa mihoatra ny antsasa ky ny voka-bary eran-tany manontolo. Ny anton 'izany dia mila hafanana, hamandoana ary hazavana ny fambolem-bary. Ny faritry ny zana-pehin-tany sy ny faritra ambanin' ny zana-pehin-tany, izay tany mafana sy mando, no tena ahafahana mamboly vary mandavantaona. Tsy dia sarotiny loatra kosa ny vary ny momba ny nofon-tany. Ny rano kosa no tena tsy afa-misaraka aminy satria dia mila hatramin' ny 100 mm isam-bolana ny vary anankiray. Araka izany dia miteraka fanjifana rano goavana tokoa ny fambolem-bary.
Mbola manasarotra ny fambolem-bary ihany koa ny asa takian' ny fijinjam-bary. Tsy mety ampiasaina amin' ny vary ny milina toy ny moissonneuse fampiasa amin' ny voly hafa toy ny varimbazaha. Noho izany dia mitaky asan-tànan' olombelona ny fijinjam-bary. Amin' izay lafiny izay dia kilasiana ho fambolena any amin' ny tany mahantra ny fambolem-bary noho ny lanjan' ny asan-tànan' olombelona izay mavesatra tokoa. Ny fitarihan-drano, ny asa tany, ny fanetsana, ny fikobahana, ny ala fakofako na fiavàna dia asa mitaky herim-batana avokoa. Misy ihany ny fambolem-bary tsy mitaky hamandoana mandavantaona fa miandry ny orana fotsiny, nefa dia kely ny vokatra azo amin' izany.
Fomba sy voambolana malagasy momba ny varyHanova
Fomba malagasy anankiray ny santa-bary, izay anateran'ny valalabemandry ny voaloham-boka-bariny ho an'ny mpitondra na mpanjaka na manamboninahitra mifehy azy amin'ny taom-pijinjana. Anomanana lanonana lehibe io fotoana io. Hatramin'ny fahagola no efa nanaovan'ny Malagasy io fomba iray io, ary amin'izao fotoana izao dia mbola mampihatra izany ny tantsaha manatitra ny santa-bary any amin'ny Filoham-pirenena.
Solon-dranom-bary tsy masaka; Amin'ny famangiana manjo, izany hoe rehefa misy maty, dia mitsapa alahelo sy mampionona ny fianakaviana mana-manjo ny mpiara-monina sy havana, ary manolotra vola kely ho an'ny fianakaviana miaraka amin'izay fampiononana izay. Io no atao hoe Solon-dranom-bary tsy masaka, satria raha tsy nisy ny nanjo dia mbola tokony ho nahavita raharaha toy ny manamasa-bary ilay havana nodimandry.
Vary lena voatoto; ka samy te ho lohany; Raha ny tokony ho izy dia hamainina ny vary alohan'ny hitotoana azy. Noho izany, raha totoina lena ny vary dia tapatapaka sy lasa lohany daholo ny ankabeazany fa tsy "maventy" na matsiraka toy ny vary totoina maina. Ity ohabolana ity dia fampiasa amin'ny fifaninana rehetra.
Aza miantsabotsambotra toy ny vary kely an-daona: Ny laona dia fitaovana fitotoam-bary amin'ny tanana vita amin'ny hazo nampiasain'ny ny Malagasy. Raha tsy ampy antsasaky ny laona ny vary totoina dia mitady lalana hivoahana isaky ny milatsaka ny fanoto. Ity dia ohateny enti-mandrara ny olona mba ho tony hatrany fa tsy ho taitaitra na hiantsambotsambotra lava.
Ny hevitra dia toy ny ketsa, raha lava loatra maningo-tena ; ary raha fohy loatra, afatotry ny sasany: Ny atao hoe ketsa dia tsy inona fa zana-bary ambolena. Misy ny zana-bary fohy ary misy ny lava, arakaraky ny tany naniriany. Ny heviny dia hoe: rehefa miteny na maneho hevitra manoloana ny hafa dia tokony lanjalanjaina sy fakafakaina tsara ary atao amin'ny antonony.
Famokaram-bary sy tsena iraisam-pirenenaHanova
Somary niakatra ny famokaram-bary eran-tany taona vitsivitsy izao, noho ny fihatsaran'ny teknika fambolem-bary indrindra indrindra, nefa tato ho ato dia hita ho somary marindrano ny Endrika:Tb rendement azo amin'ny fambolem-bary (manodidina ny 3,8 taonina isaky ny hektara).
Araky ny FAO, dia nahatratra 585 tapitrisa taonina ny akotry vokatra eran-tany tamin'ny taona 2003.
Firenena mpamokatra vary
2003 Velaran-teny novolena (MHa) Endrika:Tb rendement (taonina/Ha) Vokatra (Mt)
Sina 27,40 6,12 167,62
Indonezia 11,60 4,47 51,85
THA 11,00 2,45 27,00
Birmania 5,60 3,91 21,90
Filipinina 4,10 3,22 15,35
Brezila 3,16 3,24 10,22
Japana 1,68 5,87 9,86
Etazonia 1,21 7,45 9,03
Korea Atsimo 1,01 5,99 6,07
Egypta 0,62 9,43 5,80
Eo ho eo amin' ny 600 tapitrisa taonina eo ihany, izany hoe 4 isan-jaton' ny vokatra eran-tany no atokana ho amin' ny tsena iraisam-pirenena. Eo amin' ny 7 % eo ho eo isan-taona kosa no fiakaran' io taha io.
I Thailandy no mpanondrana vary voalohany eran-tany tamin' ny taona 2004 (10,13 tapitrisa taonina). I Viêt Nam (3,9 tapitrisa taonina) sy India (2,8 tapitrisa taonina) no manarakaraka.
I Filipinina (0,985 tapitrisa taonina tamin' ny 2004) sy Sina no mpanafatra vary betsaka indrindra.
Fampiasana ny varyHanova
Sakafo sy nahandroHanova
Ireto no karazan-tsakafo vitsivitsy azo amin' ny vary :
Vary sosoa sy vary maina (Madagasikara)
Carry (La Réunion (Nosy))
Riz cantonais (Sina)
Plov (Ouzbékistan sy Xinjiang (Sina))
Ho an'ny fahasalamanaHanova
Mitondra vitamina A betsaka ny vary mena
Ahafahana miady amin'ny aretin-kibo ihany koa ny vary sy ny rano ahandroana azy.
Endrika:Tb OGM : Organismes génétiquement modifiésHanova
Arak'ilay gazety boky Science, dia mikasa hamokatra sy hampiditra eo amin'ny tsena vary Endrika:Tb OGM manomboka ny taona 2006 i Sina izay mpamokatra sy mpanjifa vary voalohany eran-tany. Karazany roa vaovao vokatry ny fikarohan-dry zareo Sinoa izy ireo, dia ny vary Xianyou 63 (maharesy ny pyrale du riz) sy ny Youming 86. Voalaza fa mampihena ny fampiasana Endrika:Tb pesticide hatramin'ny 80 % izy ireo, mahatsara ny fahasalaman'ny mpamboly, sady manatsara ny Endrika:Tb rendement ihany koa (6,36 taonina/hektara). Tsy mbola nisy anefa fikarohana ara-tsiantifika nanaporofo ny tsy fisian'ny voka-dratsiny na amin'ny tenan'olombelona na amin'ny sehatra hafa. Marihina fa ankoatr'io tetikasa momba ny vary Endrika:Tb OGM io, dia ny soja ihany aloha hatramin'izao no sakafo Endrika:Tb OGM tena efa miparitaka amin'ny tsena.
Voka-dratsin'ny fambolem-bary amin'ny tontolo iainanaHanova
Ny fambolem-bary dia manana ny lafy ratsiny eo amin'ny toetr'andro sy ny tontolo iainana, noho izy mamokatra metanina betsaka loatra.  Ny metanina moa dia etona iray tafiditra ao anatin'ny sokajin'ny Endrika:Tb gaz à effet de serre izany hoe miteraka fitomboan'ny hafanana eto amin'izao tontolo izao. Misy bakteria anankiroa miasa amin'ny fambolem-bary dia ny bakteria mivelatra amin'ny toerana tsy misy ôksizena (anaérobie) izay miteraka metanina ; sy ny bakteria mivelatra amin'ny toerana misy ôksizena (aérobie) izay mampihena ny matanina kosa. Ny teknikam-pitarihan-drano ampiasaina ankehitriny amin'ny fambolem-bary dia manome vahana ireo bakteria anaérobies, ary ny vokatr'izany dia betsaka kokoa ny metanina miforona sy mihanaka amin'ny rivotra iainana. Misy teknikam-pitarihan-drano hafa anefa azo ampiasaina hanenana io voka-dratsy iray io.
Ny famokarana vary iray kilaograma dia miteraka metanina 120 g. Ny fambolem-bary noho izany no antony faharoa miteraka metanina eto an-tany (60 tapitrisa taonina isan-taona) aorian' ny fiompiana biby mamadika hota (80 tapitrisa taonina isan-taona).
Mitaky rano betsaka ihany koa ny fambolem-bary. Any Etazonia sy Aostralia ohatra dia mahalany ny 7 % -n' ny rano ampiasain' ny firenena iray manontolo ny fambolem-bary, kanefa dia tsy mitondra afa-tsy 0,02 % amin' ny PNB fotsiny ihany. Any amin' ny firenena manana rano betsaka kosa dia tsara ny ateraky ny fambolem-bary satria miaro amin' ny tondra-drano izy.
Loharano sy tonon-tsiahyHanova
↑ Fikarohana momba ny fifandraisan'ny fambolem-bary sy ny Endrika:Tb méthane
Torolàlana fanamboarana milina fitotoam-bary - [pdf]
Rice Knowledge Bank Bankim-pahalalana momba ny vary
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vary&oldid=1038881"
Dernière modification le 13 Oktobra 2021, à 11:19
Voaova farany tamin'ny 13 Oktobra 2021 amin'ny 11:19 ity pejy ity.